रुपन्देही हत्या प्रकरण झन् झन् रहस्यमय बन्दै , एक हप्तामा के गर्यो प्रहरीले ?::Nepal's Digital Paper
रुपन्देही हत्या प्रकरण झन् झन् रहस्यमय बन्दै , एक हप्तामा के गर्यो प्रहरीले ?
मृतक चौधरीको परिवारमा अहिले २ छोरी, एक छोरा, श्रीमती र बुबाआमा छन् । घटनापछि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विज्ञप्ती जारी गर्दै हत्यारामाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बसेका चौधरी पछिल्ला वर्षदेखि गाउँमै बस्दै किसानी गर्दै आएका थिए । कुर्मी समाजवादी पाटीका केन्द्रीय सदस्य रहेको सो पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
घाँस झार्दै गर्दा खसेर वडासचिवको निधन
बाह्रबिसे बजार निषेधित क्षेत्र घोषणा